ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုစားခြင်းဤအရာသည်ယောက်ျားအားလုံးလုပ်သောအမှား ၁၉ ခုဖြစ်သည် - သတင်း
၁၉ ယောက်အမှား (၁၉) ခုလုံးကယောက်ျားလေးများသည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစားခြင်းမှာအပြစ်ရှိသည်
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုစားလိုက်၊ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသွားချော့မော့လိုက်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာကမင်းအတွက်ကောင်းတယ်၊ လက်ခံသူအတွက်ကောင်းတယ်၊ လူတိုင်း ။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ကောင်မလေးဘယ်လိုလက်ချောင်း , ဝတ်လစ်စလစ်ရဖို့ကိုဘယ်လို , မိန်းကလေးတစ် ဦး ရဲ့ Boob ထိတွေ့ဖို့ဘယ်လို နှင့် မိန်းကလေးတွေဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ အခုတော့ယောက်ျားတွေကမိန်းကလေးကိုဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာကိုပညာပေးဖို့လိုတယ်၊ အမှားကင်းတယ်။
အရာ Gilmore ကောင်လေးသင်တို့အဘို့လဲကြလိမ့်မည်
အိပ်ခန်းထဲမှာအမှားတွေဖြစ်နိုင်တယ် - ဒါကောင်းပါတယ်။ အဓိကကတော့ဒီအမှားတွေကနေသင်ခန်းစာယူတာပဲ၊ ဒါကြောင့်လူတိုင်းကလိင်ကိုပိုနှစ်သက်ကြတယ်။
ဘုရားသခင်သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်သင့်အားလက်ချောင်း ၁၀ ချောင်းပေးခဲ့သည် ကောင်မလေး သူမ၏အပေါ်သွားနေတုန်း။
ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုလက်ချောင်း ၁၀ ချောင်းပေးရုံမကလူတွေကိုစကားပြောဖို့သာမကမိန်းမတွေကိုပါလျှာပေးခဲ့တယ်။ ဤရွေ့ကားကိုလျက်ခြင်း, clit အထိရုံစက်ရုပ်မဟုတ်ပါဘူး vag- အပေါက်အထိ - ဒါပေမယ့်တစ်လျှောက်လုံး licking ရပါမည်, မြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှု, ညာဘက်လက်ဝဲမှလျင်မြန်စွာ, ကြီးမားသော ol '' နှေး licks - သင်ရရန်ရှိသည် အဲဒါကိုသို့။
သူမဆူညံသံအောင်သို့မဟုတ်မည်သည့်အပြုသဘောခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလျှင် သူမ၏နောက်ကျော arching, သင်၏ဆံပင်ဖမ်းဆုပ်ကြောင်းစသည်တို့လုပ်နေတာစောင့်ရှောက်အော်ဟစ်, ထို့နောက်စိတ်မကောင်းပေမယ့်သင်ဖြစ်ကောင်းတစ်ခုခုလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမဘာလိုချင်သလဲဆိုတာသူမကိုမေးပါ၊
စာရင်းကဆက်သွားသည်။ သငျသညျဤမျှစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်သင်အကြီးအကြည့်ရှုမယ့်နေလျှင်အမှန်ကတော့, ဘာမှမပြောပါနဲ့
၆။ တစ်နာရီမိုင် ၁၀၀ နှုန်းဖြင့်လှည့်ပါ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစားတာဟာမီတာ ၁၀၀ မျှသာမဟုတ်ဘဲမာရသွန်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်။ မာရသွန်ပြေးသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်သည်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးခြင်းမပြုမီမိမိကိုယ်ကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ မပြေးနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကတဖြည်းဖြည်းနှင့်သူမတုန့်ပြန်ပုံကိုနှင့်အချိန်အတွက်လျက်၏အရှိန်အဟုန်နှင့်မြန်နှုန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှေးကွေးလျက်လျက်ရန်လိုအပ်သည်။ သူမအထွတ်အထိပ်ရောက်ခါနီးတွင်သာအရှိန်မြှင့ ်၍ ပန်းတိုင်သို့အရောက်သွားသည်။ အဆိုပါ finish ကိုလိုင်းသူမ၏ orgasming ။
ထွက်ပေါက် PAL တစ်ပြင်လုံးယောနိရှိပါတယ်။
10. စက္ကန့် 30 အဘို့အမိန်းကလေးတစ် ဦး အပေါ်ဆင်း Going နှင့်လုံလောက်သောရဲ့စဉ်းစားပါ
ဘယ်လိုပေါ်မူတည် ဖွင့်သည် သူမသည်သူမလာလိမ့်မည်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်း flash: မိန်းကလေးများသည်ယောက်ျားများကဲ့သို့မဟုတ်ပါ ကျနော်တို့လာရန်အများကြီးပိုရှည်ယူပါ လိင်ဆက်ဆံစဉ်အချိန်အတန်ကြာဖယ်ထားသကဲ့သို့စိတ်ရှည်မှုလိုသည် စနစ်တကျ သူတို့ကိုသူမ၏လာစေရန်သူတို့ကိုအချိန်ယူပါ။ အရှုံးမပေးမီနှစ်မိနစ်မပြည့်မီအစာစားသူမည်သူမဆိုသင်တန်းပို့ချရန်လိုအပ်သည်။
11. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အရှုံးမပေးရန်ငြင်းဆန်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပျက်သည်မဟုတ်
သူငယ်မဖြစ်ပျက်ဘူး။ ကျော်ကြည့်ပါ၊ ဒီဟာကသင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အတ္တကိုမထိခိုက်စေဘူး။
သင်ဆင်းရှိနေစဉ် 13. တစ်ခုလုံးစကားပြောဆိုမှုရှိခြင်း
14. သင်သည်ငါတို့အပေါ်ကိုဆင်းသွားလျှင်, ငါတို့သည်သင်အပေါ်ဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုယူဆ
ငါ့သူငယ်ချင်းဘာမှမယူမှတ်ပါနှင့်၊ မိန်းမများသည်မင်းကိုအကြွေးမဆပ်နိုင်ပါ။ အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။
သင်၏ ဦး ခေါင်းပေးခြင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူပြောခဲ့ဖူးသောအရာကိုသူမကြိုက်ပါကကျွန်ုပ်အလိုရှိမည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ခံတွင်းရုံအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ foreplay ကြောင်းစဉ်းစား 17. ကမဟုတ်ပါဘူး
မည်သူမျှသင့်ကိုအတင်းအကျပ်မပြုစေလိုပါက၊ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်တက်တက်ကြွကြွရှိပါကအနည်းငယ်စိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်ရှုပါ
အဆိုပါ DMS သို့လျှောဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေ
ကြည့်စမ်း၊ မင်းကငါ့ကိုစားဖို့သွားမယ်၊ မင်းရဲ့လက်ချောင်းတွေထက်ကိုယ့်လျှာကိုသုံးဖို့လိုတယ်။ မဟုတ်ရင်တောင်ဘက်ကိုသွားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
• စိတ်ပျက်စရာမိန်းကလေးများအားဖြင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုမည်သို့လက်ချောင်းဖြင့်ရိုက်ရမည်နည်း